Humni miidiyaalee daran cimuu qaba
Addunyaan har'a keessa jirru addunyaa odeeffannooti. Dur waanti iddoo tokkotti uumame ykn kalaqame tokko akkuma haalasaatti bakka biraa qaqqabuuf ji'oota darbees waggoota lakkoofsisa ture.
Har'a barichi bara odeeffannoo waan ta'eef sun seenaa ta'eera. Waanti fiixee addunyaa tokkotti uumamee hamma liibsuu ijaatti kallattii hundatti tamsa'ee addunyaa mara walgahaa jira.
Karaalee odeeffannoon ittiin tasamsa'u keessaa tokko ammoo miidiyaadha. Ammaan tana dameeleen miidiyaa babal'achaa dhufus xiyyeeffannaan barreeffama kanaa garuu waa'ee cimina miidiyaalee ijoo (pireesiifi elektironiksii) biyya keenyaarratti kan fuulleffateedha.
Miidiyaalee ijoon biyyattiitti argaman humna cimaa uummachuu waan hindandeenyeef ummanni ammaan tana xiyyeeffannaasaa miidiyaalee hawaasaarratti taasisaa jira.
Akka hayyoonni damichaa jedhanittis, miidiyaalee ciccimoon yoo uumamman walitti bu'iinsotaafi dhimmoota biroorratti naannawawwan gara garaarraa ragaalee funaanuun hawaasicha rakkoolee hinbarbaachisnerraa eeguuf akka humna argatan taasisa.
Kutaa barnoota gaazexeessummaafi kominikeeshinii Yunivarsitii Finfinneetti barsiisummaan waggoota dheeraaf kan tajaajilan Doktar Gabramadihin Sim'oon akka jedhanitti, ogeessonniifi dhaabbileen miidiyaa biyyattiitti argaman gama miiraafi fedhii ummataa qabatanii socho'uutiin hanqinoota qabu.
“Iddoowwan tokko tokkotti oggaa walitti bu'iinsonni uumamuuf jedhan mallattooleen ni mul'atu. Kanaafuu dhaabbileen miidiyaa caasaalee qabanitti gargaaramuun walitti bu'iinsotaafi mallattoolee biroo dursanii akka beekaniif humansaanii cimsuu qabu.
Odeeffannoowwan dursanii argachuunsaaniis ummanniifi mootummaan rakkoolee hawaasicha jidduu jiru dursanii akka hiikaniifi of eeggannaa akka taasisan gochuusaarrayyuu hanga imaammata mootummaa jijjiirsisuutti akka isaan geessisu eeru.
Kana malees miidiyaaleen ummata dadammaqsuufi odeeffannoo sirrii dhiyeessuudhaan lubbuu namaa sababa jeequmsaatiin baduuf jedhuufi qabeenya barbadaa'u baraaruuf ittigaafatamummaa akka qaban ibsu.
Itoophiyaa dabalatee biyyoota danuutti sababiin hammaachuu walitti bu'iinsaa inni guddaan ummanni odeeffannoo siriifi dhuga qabeessa argachuu dhabuu ta'uu hayyichi eeranii, qaawwawwan kanneen guutuufis keessumaa humna miidiyaalee cimsuun akka barbaachisu himu.
Miidiyaaleen ammaan tana biyyattiitti argaman waan humna cimaa uumuu hindandeenyeefi odeeffannoo sirrii dursanii ummata biraan waan hingeenyeef ummanni miidiyaalee hawaasaarratti akka xiyyeeffatu ta'eera jedhu.
Miidiyaaleen kunniin qaama isaan hordofu kan argataniif waan miidiyaan ijoon ykn ummataa odeeffannoo dhokseera jedhanii waan yaadaniif miidiyaaleen hawaasaa odeeffannoowwan dhugaas ta'e dhara dafanii kan waliin gahan ta'u ibsu.
Kanaafuu miidiyaaleen ejjennoo cimaa akka qabaataniifi gama fedhii odeeffannoo ummataa guutuutiin waan irraa eegamu akka bahatan gochuun akka barbaachisu eeru.
Biyyattiitti keessumaa oggaa walitti bu'iinsonni uumaman miidiyaaleen ittigaafatamummaasaanii sirnaan bahachuu qabu kan jedhan ammoo Yunivarsitii Finfinneetti barsiisaa gaazexeessummaafi kominikeeshinii, gargaaraa pireofesaraa Makuriyaa Makaashaati.
Ummata dursanii odeeffannoowwan sirrii qindeessuufi walitti bu'iinsichi gara toora nagaatti akka dhufu gochuu akka danda'aniifis dhimmoota balballoomsuu, qaamolee ilaalchawwan adda addaa qaban mariisisuurratti xiyyeeffachuun irraa eegama jedhu.
Ogeessonni miidiyaalee keessumaa oggaa waa'ee walitti bu'iinsaa gabaasan odeeffannoowwan ummataafi ummata walitti hinbuusne, madaalawaafi nageenya buusan dhiyeessuu akka qaban hubachiisu.
Akka ogeessaattis, lammiilee naannawa walitti bu'iinsi itti uumameetti argaman mariisisuufi yaadasaanii iftoominaan akka dhiyeessaniif eddii waltajiiwwan dhiyeessanii booda gochuun yaadawwan tokko isaan taasisan cimsuun walamantaa fiduu danda'u jedhu.
Miidiyaaleen mootummaas ta'an dhuunfaafi ogeessonni naamusaafi qajeelfama gaazexeessummaa hordofanii akka hojjetaniifi dhiibbaa gochuu akka danda'aniif humnasaanii cimsuun akka barbaachisu hayyichi dubbatu.
Gulaaltonni dhimmoota gadifageessanii yaadaniifi ilaalan jiraachuunis odeeffannoowwan gadilakkifaman dhiibbaa sirriis ta'e gadhee gadifageenyaan yaadanii ittigaafatamummaan akka hojjetan isaan dandeessisa.
Torban kana/This_Week 17521
Guyyaa mara/All_Days 1442301